Madaxweynaha Puntland oo la Hadlay Bulshada Columbus, OHIO – Radio Daljir
Madaxweynaha Puntland oo la Hadlay Bulshada Columbus, OHIO
Maarso 9, 2016 9:15 b 0
Bacaadweyn, Maarso 09, 2016 (Daljir) —Kumanaan Soomaalida gobolka Ohio ah ayaa ka soo qeybgashay xaflad Soo dhaweeyn ah oo loo sameeyay Madaxweynaha Maamulka Puntland Dr. C/wali Maxamed Cali Gaas iyo wafdi uu hogaaminayay oo dhawaan soo gaaray magaalada Columbus ee xarunta gobolka Ohio.
Goobta xaflada soo dhaweynta ay ka dhacaysay ayaa gabi ahaan buuxdhaaftay waxaana si weyn amaanka wafdiga u sugayay ciidanka Booliiska ee Columbus, iyada mudadii xaflada ay socotay lagu soo bandhigay qodbooyin kiciyay dareenka ka soo qeybgalayaasha oo isku darayay sacab iyo Mashxarad.
Waxaa ka hadlay Masuuliyiinta Jaaliyada, Madaxda ururada, siyaasiyiin, Oday dhaqameed, Culumo, iyo Musharixiinta xilalka kala duwan ka doonaya in ay ka qabtaan gobolkan ohio 2016 oo iyagu fursad u arkayay isu imaatinka Soomaali badan oo codkooda ay weydiisan karaan.
Inta badan dadkii ka hadlay xafladan waxa ay diirada saarayeen arimaha la xariira mushkilada 4.5 oo dhawaan Dr. Gaas uu ka biyo diiday in la qaato halka madaxda dalka intooda badan ay yeeleen.
Kadib markii inta badan Martidii loo idmaday hadalka ay hadleen waxaa hadalka la wareegay Madaxweynaha puntland Dr. C/wali Maxamed Cali Gaas oo uga mahadceliyay ka soo qeybgalayaasha sida ay uga soo qeybgaleen xili ay ahayd Maalin shaqo.
Dr.Gaas waxa uu si weyn u sharaxay marxalada dalka Soomaaliya iyo halka ay mareyso, isaga oo dadka ku booriyay in la joogo xiligii Soomaalidu aayahooda ka tashan lahaayeen isla markaana la dareemi lahaa in aysan jirin cid dibada is badal ka keeni karta hadii Soomaalkidu aysan la imaan.
Arinta 4.5 ayay ku tilmaamay mid aan u cuntamin shacabka Soomaaliyeed isla markaana ay wataan sida uu hadalka u dhigay Siyaasiyiin ku fashilmay Hogaanka dalka.
“Hadii caalamka oo dhan isa soo raaco la iilana yimaado qaado 4.5 ma qaadan doono ayuu yiri”
Ururka Somali American Leadership oo xafladan soo abaabulay ayaa waxa Masuuliyiintii u hadashay waxa ay u mahadceliyeen Madaxweyne Gaas iyo Diidmadiisa 4.5ka oo ah wax lagu xaqirayo Soomaali badan.
Abwaanadii ka gabayay xaflada, Kuwii ka buraanburay, iyo kuwii ka heesay waxa ay dhamaan ku hal qabsanayeen in 4.5 aan xiligan loo bahnayn.
Waxa uu dulmaray Puntland oo uu ka sheekeeyay Horumarka ay hiigsanayso, mana soo hadal qaadin wax la xariira qilaafaad siyaasadeed iyo shaqaaqooyinkii dhawaan ka dhacay, waxaase uu ugu baaqay jaaliyada dibada in ay ku laabtaan Puntland isla markaana Ilmahooda iyo Hantidooda geeyaan si ay dalkooda u bartaan.
Kahor inta uusan xaflada imaan saacado uu ku sugnaa Columbus waxa uu kulamo gooni gooni ah la lahaa qeybaha bulshada.
Madaxweynaha iyo wafdigiisa oo xiliyadii u danbeeyay ku sugnaa dalka Mareykanka waxa ay socdaalo kala duwan ku tageen qaar ka mid ah gobolada dalkan Maraykanka iyo Canada, iyaga oo kulamo la soo qaadatay Jaaliyadaha iyo madaxda goobaha ay tageen.
Waa markii ugu horeysay oo tan iyo intoo xilka madaxweynaha puntland loo doortay oo booqasho ku yimaado Dalka Mareykanka.
Qarax-yo Khasaare Dhimasho sababay oo ka Dhacay magaalada Muqdisho
WHO oo ka Hadashay Dhibaatada Cudurka ZIKA